Fampahalalana momba ny fikarakarana vokatra - Fujian Bridge Style furnishings Co., Ltd.
Ahoana no hikarakaranao ny birao fanapahana volonao
1. sasao amin'ny rano mafana avy hatrany aorian'ny fampiasana azy, esory amin'ny lamba maina ny hamandoana.
2. Ataovy amin'ny toerana maina sy matevina ny takelaka. ny manantona sy mametraka azy eo amin'ny zoro no fomba tsara indrindra.
3. Aza avela ao anaty rano mandritra ny fotoana maharitra, Aza atao anaty masinina mafana be toa ny fanasana lovia, lafaoro mikraoba, ary aza aseho masoandro mihitsy. Hanimba haingana na handrava ny takelaka fanapahana malalanao izy io. raha te-hivaingana ianao, dia tsara ny mijanona amin'ny masoandro mandritra ny 5-10 minitra.
4. Ho fanampin'ny fanadiovana isan'andro dia ilaina ny fanosotra ara-dalàna. Ny matetika matetika dia indroa isaky ny tapa-bolana. Arotsaho ao anaty vilany fotsiny ny menaka mahandro 15ml dia hafanaina eo amin'ny 45 degre eo ho eo, ary atsobohy amin'ny lamba madio. Makà vola sahaza azy ary esory eo ambonin'ilay tabilao mihetsika amin'ny fihetsiketsehana boribory. Izy io dia azo ampiasaina ho moisturizer volotsangana sy fitaovam-piadiana manidy rano. Izy io dia afaka mitazona ny hamandoan'ny volotsangana hatrany amin'ny toe-javatra misy fiovana lehibe amin'ny toetr'andro, ary mety hahatonga ilay takelaka fanapahana ampiasaina ho vaovao ihany koa.
5.Raha manana fofona hafahafa ny takelaka fanapahanao, ny fomba tsara indrindra dia ny fampiasana soda fanahazana sy ranom-boasarimakirana eo an-tampony, namaoka azy amin'ny lamba mando mafana, dia ho vaovao indray izy.
Soso-kevitra: Ity famaritana ity dia azo vokarina marika ary afangaro amin'ny vokatra tsirairay maimaim-poana, haingana ary mametraha baiko!
Ahoana no hikarakaranao ny mpikarakara ny vatanao
1.Aza atao anaty rano mandritra ny fotoana maharitra ny Organiseranao Bamboo Drawer. Ny fisitrihana lava ao anaty rano dia afaka manokatra ireo kofehy voajanahary ary miteraka fisarahana.
2.Mba hadino tsara fa ny rano amin'ny fisaka sy ny zavatra tadiavinao ho voafafa maina, tsy vitan'ny hoe afaka manitatra ny androm-piainan'ny vokatra, fa manakana ny famokarana bakteria ihany koa.
3. Ho an'ny fampiasana maharitra, ataovy maina aloha ny Organizer Drawer Bamboo, amin'ny lamba famaohana madio, aorian'ny fanasana sy fampiasana azy.
4.Aza diovina amin'ny vilia fanasana lo ny vilia fikosoham-bokinao.
5.Mba ara-potoana dia mila manosotra ny mpikarakara vatanao volotsangana ianao, mampiasa menaka mineraly kilasy sakafo fotsiny lamba malefaka ary namaoka ny tampony, tonga lafatra dia 2 herinandro indray mandeha.
6.Raha mamorona fofona hafahafa ny Organiseranao Bamboo Drawer Organizer, namaoka azy amin'ny ranom-boasarimakirana sy soda, dia hahita vaovao indray izany.